RW Saacid ?howlaha siyaasadda waan ku sii jiri doonaa wax badana waan u qaban doonaa dalka? – Radio Daljir
RW Saacid ?howlaha siyaasadda waan ku sii jiri doonaa wax badana waan u qaban doonaa dalka?
Diseembar 29, 2013 5:36 b 0
Muqdisho, December 29,2013 – Ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi faarax Shirdoon Saacid ayaa ka hadlay arimo badan oo la xiriira mustaqablkiisa, kadib markii uu wareejiyey xilka ra?isal wasaarenimo oo uu hayey mudo sanad ka badan.
RW Saacid ayaa wax laga weydiiyey arrimo la xiriira mustaqablkiisa siyaasadeed iyo in uu ku sii jiri doono masraxa siyaasada Soomaaliya, maadama uu mudo ahaa hugaamiye xukuumadeed.
?qof kasta wuxuu dalka u qabanayo maaha inuu u maro siyaasadda, maanta Soomaaliya way nugushahay oo waxay u baahan tahay in wax badan laga qabto.? Ayuu yiri Saacid oo ka jawaabayey su?aal ay weydiisay VOA.
Cabdi faarax shirdoon ayaa ayaa markaas kadib si cad u sheegay inuu ku sii jirayo siyaasada Soomaaliya isla markaasna uu rajo wanaagsan ka qabo in uu dalka wax u qabto.
Ra?isal wasaarihii hore ee dalka ayaa u rajeeyey xukuumada cusub inay guul ka gaarto howlaha adag ee horyaala dowladda uu horkici doono RW Cabdiweli Sheikh Axmed Maxamed oo isaga bedelay, wuxuu beeniyey Saacid in fara-gelin lagu sameeyey howlihiisa intii uu ra?isal wasaaraha ahaa.
Ciidamada dowladda oo la wareegay gacan ku haynta deegaano hoostaga Berdaale ee gobolka Baay